Umsunguli weLive Linux ushiya iphrojekthi ngenxa yezinkinga zangaphakathi | Kusuka kuLinux
Umsunguli weLive Linux ushiya iphrojekthi ngenxa yezinkinga zangaphakathi
UJuan Romero Pardines (umsunguli we-Void Linux project) Ngayeka iphrojekthi ngenxa yezinkinga zangaphakathi phakathi kwabathuthukisi futhi ukuthi ukwesula kwakhe kuholele kwezinye izingxabano ezavela lapho umsunguli weVoid Linux avele aqhuma futhi wabangela nokulwa kwangaphakathi.
Ukwahlulela ngemilayezo ekuTwitter kanye nenqwaba yezitatimende ezihlaselayo nezinsongo ezibhekiswe kwabanye onjiniyela, UJuan wahlushwa ukwesaba, ngalo uJuan Romero Pardines Ngenza isinqumo sokususa ikhosombe lakho ku-GitHub equkethe amakhophi wentuthuko ye-xbps, xbps-src, mklive ne-void-runit.
Futhi Ngesikhathi sokulwa, wasabisa abanye abathuthukisi ngokuthi bazofaka izicelo zomthetho futhi wathi ngethuba lokuhoxiswa kwelayisense lekhodi ebhalwe nguye. Yize kulokhu kokugcina kungenzeki ngoba i-Void Linux inikezwa ngaphansi kwelayisense le-BSD futhi ilayisense yomthombo osuvele uvulekile ayikwazi ukuhoxiswa, ngakho-ke uJohn angashintsha kuphela ilayisensi yekhophi lakhe bese eposa izinguquko ezizayo ngaphansi kwelayisensi entsha.
Yavela kanjani inkinga?
Amahora ambalwa ngaphambi kwalo, UJuan uthumele isiphakamiso sokuhlela kabusha izinqubo ezihambisana nokwenza izinguquko kumaphakeji. Ngokusho kukaJuan, uhlelo lwamanje lokuthatha izinqumo lokuvumela ushintsho ludinga ukwenziwa ngcono, ngaphandle kwalokho kuba nesiphithiphithi futhi kudala ubungozi bezinkinga ezinkulu lapho kuvuselelwa imitapo yolwazi yohlelo.
Njengendlela yokuphuma, UJuan uhlongoze ukwethula ukubuyekeza kokuqala okuyimpoqo kwabahlanganyeli abaningana izinguquko ezenziwe kumaphakeji athinta amanye amaphakheji. Akubona bonke abavumelana nale ndlela, esaba ukuthi ukubuyekezwa kuzoholela ekwehleni kokusebenza kahle kwentuthuko kanye nokuvela kwezingxabano phakathi kwabanakekeli, lapho uJuan asabela khona ngodlame ngokungavumelani, okwenza ingxabano.
Incazelo evela kubathuthukisi ramashalofu avele kusayithi le-Void Linux, okuyiUqinisekise abasebenzisi ukuthi ukuhamba kukaJuan ngeke kuthinte ukuthuthukiswa kanye nesimo sephrojekthi.
Egameni lomphakathi, kuphinde kwaxoliswa nokuziphatha kabi kukaJuan kanye nekhwelo lokuhloniphana.
Ukuphendula umbuzo osheshayo wosuku, uJuan RP (xtraeme) ukhethe ukushiya iphrojekthi ye-Void Linux.
Ngeke kube khona ukuphazamiseka okubonakalayo kwabasebenzisi, futhi iphrojekthi izoqhubeka njengakuqala. Siyakwazisa ukuxhaswa kwakho kwe-Void nokuqhubeka nokuqhubekisela phambili i-Void State. Kunoma imuphi umphathi noma umnikeli othole okunye kokuthunyelwe kwakamuva kwe-xtraeme, ngithanda ukudlulisa ukuxolisa kwami ​​ngalokhu nakulabo bephrojekthi. Ize iyiphrojekthi esifuna wonke umuntu abambe iqhaza kuyo, futhi lokho kusho ukuphatha abanye ngenhlonipho.
Futhi yilokho lokhu akuqali ukudinwa kukaJuan, njengaku-2018, akazange aphendule izinyanga ezimbalwa kumilayezo futhi ishiye abanye ababambiqhaza bengenayo ingqalasizinda nezinqolobane nangaphambi kwalokho isikhathi esingaphezu konyaka wayengazange abambe iqhaza entuthukweni, ukuphoqa umphakathi ukuthi uhlele, udlulise amakhosombe e-GitHub kwi-akhawunti entsha, futhi ulawule ingqalasizinda.
Ngokunikezwe lokhu, (ezinyangeni eziyi-8 ezedlule), uJuan ubuyele entuthukweni, kepha izinqubo ku-Void Linux zimile ngokuya ngaye futhi wayengasabalulekile. Kodwa uJuan wayesazizwa njengothisha, okwadala ukunganeliseki ngabanye ababambiqhaza.
Kusolwa ukuthi emiyalezweni kaJuan etholakala esidlangalaleni, kubonakala ama-echoes kuphela engxabano enkulu eyenzeka ngesikhathi kukhulunywa umnyango ovalekile futhi ehlobene nezinkinga empilweni yakhe yangasese (kunobufakazi bokuthi lokhu kuhlaselwa kubangelwe ukushiwo okungafanele Izinkinga zomuntu kaJuan).
Iningi lababekhona belingajabule ngokuziphatha kukaJuan ngakwabanye ababambiqhaza, umbono wakhe ohlukanise ngokweqile wezinto nezitatimende ezithukayo ziphendula ukungavumelani nombono wakhe.
Ngemuva kokuthi uJuan ethumele umyalezo ngenhloso yakhe yokuhamba, amanye amalungu e-Void Linux awazange alinde isikhathi eside futhi ngokushesha ahoxisa ilungelo lakhe lokuthola izinqolobane nezingqalasizinda nangemva kokuhlasela abahlanganyeli abaningana ngenhlamba, bamane bafinyelela esivumelwaneni sokubuyisa ukufinyelela kwabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Umsunguli weLive Linux ushiya iphrojekthi ngenxa yezinkinga zangaphakathi
Kwenzekani kulo mhlaba okushintshiwe konke. Kwenzeka okufanayo nakuSolus. Hhayi-ke, into yeQt isishiye emaphentini ethu ngezibuyekezo zokuphepha.
PICORO LEnz MCKAY kusho
Le ndatshana ihluza okuningi okwenzekile: NGABONA UKUPHAWULA OKUVUSA! FUTHI KWAKUNJALO:
"Ngaphambi kokuza uku-oda lapha hamba uyo-oda izinkinga zakho"
Futhi lokhu kusobala ukuthi kuyisihlamba! Kodwa-ke, uphendule wathi: «ngiyeke ukuthi asikhulumi ngami» KONKE OKULAPHA KUBHALWE NGOKUQINILE futhi amakhasi ewebhu alondolozwe kufayela lomshini we-wayback ayakubonisa.
uma kwenzeka ukuphawula kuzomodeliswa .. kunemithombo eminingi ezokushicilela ngakho ungazami ukungithulisa!
Phendula ku-PICCORO LEnz MCKAY
Kuthumela amakhala ukuthi umsunguli wokusabalalisa kufanele ashiye iphrojekthi ngenxa yabantu abafike kamuva futhi abangavumelani nokuthile.
Kwenzeka kumaphrojekthi amaningi, kufika abantu abangapendi lutho, abenza izinto ezimbili futhi asebevele befuna ukukhahlela abantu asebenze iphrojekthi enjalo iminyaka eminingi.
I-Rust 1.43, inguqulo encane ehlanganisa kuphela izibuyekezo nokulungiswa
I-LXQt 0.15.0 isivele lapha yethulwe ukuthuthuka okuhlukahlukene nezinguquko ezibalulekile